shure mwedzi uye nyika kumufananidzo iwoyo | Apg29
shure mwedzi uye nyika kumufananidzo iwoyo
The Chinese Satellite Longjiang-2 mufananidzo mwedzi shure uye nyika mufananidzo chete.
Mufananidzo mwedzi uye pasi kumufananidzo iwoyo waiva 4 February 2019. The Chinese Satellite Longjiang-2 chave shure mwedzi uye mufananidzo pasi inooneka kuva duku zvikuru muna rezasi zvakanaka wekona.
Tikamira kurutivi kure mwedzi
mwedzi Last aburuka China vaine motokari unmanned ari zvisingawanzoitiki seri chomwedzi kumbobereka zvinoonekwa kubva Earth. Zvino, pikicha itsva kubva Chinese Satellite rinoburitsa isingawanzowanikwi Kutarira wose mitumbi zvose kumativi yokudenga akaona shure mwedzi.
Hachisi inonakidza! Mugore wezvose zvakasikwa naMwari, pane nyika yebhuruu yatiri vanhu kurarama.
Uye Mwari anoona kuti vanhu panyika pano. Akada mumwe nomumwe wedu zvokuti akatuma Jesu kuti afire zvivi zvedu zvakaipa. Kana tichigamuchira vanogamuchira Jesu anova vinfrälsta uye kuponeswa,
The mufananidzo kubva Longjiang-2 aiva kilobytes 16 chete kukura asi akatora anenge 20 maminitsi kudhanilodha. Mufananidzo chepakutanga ari dzepepuru asi ruvara kugadziriswa kuti mavara zvikuru chaiko.
The mufananidzo pamusoro rakatorwa kamera muchikepe Chinese DSLWP B / Longjiang-2 Satellite. Kungava mufananidzo mwedzi wokutanga shure pamwe nenyika zvataona vamwe mamwe Chinese chitundumusere-musere , Chang 'e 5T1, riri mufananidzo iwoyo akatora mufananidzo maviri kwemiviri yokudenga muna 2014.
Hombodo pamusoro mwedzi uye pasi
Kune dzimwe mifananidzo divi kure mwedzi uye pasi redu yebhuruu nyika.
Musi waJuly 5, 2016 Epic mifananidzo ine nhevedzano mifananidzo kubva chinhu kuti havasati vamboona kubva Earth. Above uchaona rimwe zvifananidzo Pasi iri kutenderera umo necheseri.
Vecka 16, söndag 21 april 2019 kl. 14:48